Ngabe i-SRAM Rival ilingana nani? - Izimpendulo Ezihamba Phambili
Main > Izimpendulo Ezihamba Phambili > ISram imbangi 1 groupset - ukuphendula imibuzo
ISram imbangi 1 groupset - ukuphendula imibuzo
Ngabe i-SRAM Rival ilingana nani?
(I-Techno music) - Ukwethulwa kwe-SRAM entsha kusethwe iRED eTAP AXS Group ngamaketanga ayo amancane kubonakala kuqhubeka nomkhuba wokushintshwa kalula kwamabhayisikili emigwaqo, futhi ungahle uzibuze ukuthi kungani? - Ngicabanga ukuthi kungani ukushintshwa kwamabhayisikili okugijima kuncipha? - Kule ndatshana sizochaza futhi sikubonise nokuthi kungani amaketanga amancane engasho ukuthi amagiya amancane kulokhu. Ngemuva kwalokho sizosebenzisana ne-SRAM ukukuchazela ukucabanga kwayo. - Ukwenza kabusha, i-SRAM yehlise usayizi wamaketanga kusengaphambili.
Esikhundleni sika-53/39 sino-50/37. Esikhundleni sika-52/36 sino-48/35. Futhi ekugcineni, sinikeza ukuhumusha okuncane ku-50 /. 34, sino-46 / 33. - Izinto ezintathu ziqale lo mkhuba wokuncipha kwamaketanga.
Okokuqala, imigwaqo abagibeli bamabhayisikili abangochwepheshe ishintshile. Okwesibili, imigwaqo abahamba ngayo abagibeli bamabhayisikili abavamile ishintshile, futhi ekugcineni, ukuthuthuka kwezobuchwepheshe empeleni kukuvumelile ukuthi kwenzeke.- Manje uhambo lwethu luqala enkungwini yesikhathi. 1999 ct to be precise, a year with Britney Spears and Lance Armstrong - Not together? - Kwazi bani? Noma kunjalo, emuva ku-1999 kanye ne-Angliru eyethusayo, into ethile yesikhashana ekujikelezeni kwebhayisikili yabonwa ohambweni olukhulu - Ohambweni lokuthola iqiniso, uPedro Delgado wathi akukho okufana nakho okwake kwabonwa phambilini.
Abagibeli bamabhayisikili kwakudingeka balungise igiya labo kakhulu ukuze bavuke. Ngisho noJan Ullrich, omunye wabagayi abakhulu kunabo bonke esikhathi sonke, wakhetha ngokungavamile iringi encane - noma kunjalo, ubuhle babubula, kodwa ngokombono wabalandeli kwaba yimpumelelo enkulu, ngakho-ke abagqugquzeli bomjaho bomhlaba Ukuvakasha eDejiros bekufuna ukwenyuka okunonya kakhulu njengalesi Zoncolan ne-Alto. ukufaka de los Muchachos.
Abagibeli abangochwepheshe njalo kwakufanele bafake amasekethe amancane kakhulu, ngakho abakhiqizi nabo balandela lokho. Khonamanjalo, uLance Armstrong ngokungazelelwe waduma ngokukwazi ukuthengisa ikheshi elisheshayo ngenkathi ebusa amaTours de France ayisikhombisa, futhi kulokhu i-Time yaba ngabantu abaningi. Manje siyazi ukuthi lokhu akulona iqiniso ngokuphelele.
Kepha kithina sonke kube nomthelela omuhle. Kuyini lokho ukuthengisa i-cadence esheshayo akusebenzi kahle. Ukuhambahamba nge-cadence efanelekile nokuba namaphaseji akuvumela ukuthi wenze lokho ngokuzumayo kwaqala ukuphola.
Ama-roadies alukhuni aqala ukusebenzisa amagiya alula - eminyakeni embalwa kamuva kwaqala ishifti lapho nathi sigibela khona njengabahleli bomjaho abangochwepheshe, thina sonke esasifuna ukuhlola umhlaba futhi, sixoxisana ngokuqwala okunonya. Thatha i-Oman, ngokwesibonelo, lapho sihambela khona njengamanje. Akukaze kubhekwe ngokwesiko njengendawo yokuhamba ngamabhayisikili omgwaqo.
Futhi lokho kungenxa yokuthi eziningi zezintaba ezinhle lapha zigcwele isihluku nje ezindaweni, igiya lamabhayisikili lomjaho wesimanje liguquguquka kakhulu okwenza izindawo ezifana nalezi zifinyeleleke kalula. Ngenkathi edlule bekuzothatha ibhayisikili lokuvakasha noma ibhayisikili lasentabeni ukubhekana nalezo zinto ezingenangqondo ezingama-20% - Futhi ekugcineni ubuchwepheshe, njengobuchwepheshe amabhayisikili akho athuthukisiwe asebenze izinto eziningi. Ngekhasethi elinejubane eliyisithupha ubungenazo izindlela eziningi zamagiya zokukhuphuka umqansa onjenge-Angliruor Jebel Shams e-Oman, lapho sikhona namuhla, bekungeke kube yilokho ubuchwepheshe obutholakala kuma-70s noma kuma-80s - cha, kodwa njengoba uzithuthukisile amaketanga, amagiya namasondo, amanye ama-sprocket manje avele ngemuva nange-sprocket entsha ngayinye ukuze isilinganiso segiya sisabalale.
Manje base benobuchwepheshe bokukwenza. Abagibeli abanjengoLance Armstrong benze amagiya aphansi aguqule abagibeli abapholile nabajwayelekile njengathi Siqale ukugibela ngokukhuphuka ngamandla futhi kanzima, kwesinye isikhathi ngisho nase-asphalt - Cha, okuzosilethela ama-sprocket angemuva ayishumi nambili kanye namaketanga amancane ngaphambili ngo-2019, kepha lokhu hhayi ngamagiya alula. Mhlawumbe isifunda esikhulu kunazo zonke lapha.
Ngiyabonga, ngukuthi i-SRAM ithi baklama leli qembu elizungeze ama-gear ratios kunokumane bathuthukise elangaphambilini. - Kulungile, bopha manje. Thatha i-espresso ephindwe kabili ngoba uSi uzohamba yonke indawo ephezulu ye-uber-tech nerd. - I-SRAM inciphise usayizi wamaketanga ayo, sesivele sikwazi lokho.
Kepha kubalulekile ukwazi ukuthi usayizi wesethi yamaketanga uwodwa awusho lutho. Futhi kungenxa yokuthi amagiya asebenza ngababili. Ngakho-ke kuleli qophelo kudingeka sikhulume ngekhasethi entsha ene-12 esheshayo, enamazinyo ayishumi.
Manje, amakhasethi wamabhayisikili emigwaqo ngokwesiko ancishiswe abe yi-11/2 sprocket. Yize ama-chainrings mancane, igiya eliphezulu likhudlwana, futhi lokho kungenxa yokuthi umehluko wamazinyo ongemuva uzoba nomthelela omkhulu esilinganisweni sakho segiye kunokungeza amazinyo amane engeziwe kuketanga lwakho olukhulu. Isibonelo, uma usebenzisa u-50/10 inesilinganiso segiya esingu-5: 1, okusho ukuthi isondo lakho langemuva lizozungeza kahlanu kukho konke ukujika kwekhonki.
Uma, noma kunjalo, usebenzisa u-gearbox wendabuko we-Racer-Top 53/11 ono-4.82: 1 ratio, okusho ukuthi uzohamba amasentimitha angu-37 ngaphezulu ngawo wonke amajika uma usebenzisa u-50/10. Lokho kungahle kungazwakali njengokuningi, kepha uma ujikeleza nge-100 rpm, lokho kungamamitha angama-37 ngomzuzu. 2.2 km / h ngokushesha - Umphumela wala mazinyo ayishumi ubonakala kakhulu nakulokhu kubhayisikili, lapho ngino-48/10, ngilinganise cishe negiya elifanayo nelikhethwa ngumshayeli womjaho wama-53/11. ngokwenza lokhu kusho ukuthi njengamanje ngishayela u-60 km / h futhi kufanele nginyathele ngo-100 rpm kuphela.
Vele awutholi lutho mahhala ngokuhumusha, uma ufuna ukushayela ngokushesha uzoqina ukuze uzuze amandla amaningi. Kepha, kuyakhombisa ukuthi uma unemilenze, noma kulokhu ukwehla, unamagiya okuqala ukunyathela. - Ngakolunye uhlangothi lwe-spectrum, igiya lami le-35/28 livunyelwe.
Kufanele nginyuke cishe ngama-20% eJebel Shams kulesi sigaba sombulali. - Ngeminye imiboniso ye-nerd ne-hands-on, siyabona ukuthi amagiya amancane awasho ukuthi ama-gear ratios amancane, nangokwakha kabusha umzimba wamahabhu amathathu, i-SRAM ingalingana naleso sprocket esingemuva kwamazinyo ayi-10. Kepha futhi sebenzisa amagiya ayishumi nambili ngokunciphisa ukweqa phakathi kwama-sprocket ngamanye i-Ain SRAM icabanga ngemuva kwawo - cha.
Ngakho-ke ngokusobala akuyona nje eyama-aisles aphezulu aphezulu kanye nama-aisles aphansi aphansi. Ngokususa uhla lwamagiya kukhasethi, bakwazile ukunciphisa igebe phakathi kosayizi bezintambo ngaphambili, abathi kuthuthukisa ukususwa ngaphambili. Esikhundleni segebe lamazinyo ayi-16 kusethi ejwayelekile ye-compact chain.
Kuwo womathathu lawa masayizi amasha okuxhunywa ngamaketanga, unegebe lamazinyo ali-13 kuphela, futhi lelo gebe elincane futhi lisho ukuthi uchungechunge akudingeki lukhuphuke luye kude noma kunjalo, ngakho-ke zombili lezi zinto, njengoba besho, zithuthukisa ukuguquka ngaphambili iningi lendawo engemuva futhi uyihlanganisa nochungechunge oluncane; kungaba ngamazinyo ama-3, 4, noma ama-5 amancane lokhu kusho ukuthi abagibeli bazokwazi ukusebenzisa ujantshi wangaphansi kancane. Ngoba noma ngabe unesihlakala esincane samazinyo ayi-10 esinikela ngegiya eliphezulu ngaphezulu, kusho ukuthi uma uhlanganisa amaketanga amancane ekhasethini lonke endandeni enkulu, empeleni unamagiya alula - kepha kungani kubaluleke kakhulu lapho ushintsha kahle ngokushelela? Futhi kungumbuzo omuhle, ngicabanga ukuthi iningi lethu livame ukugwema ukwehla komgwaqo ngangokunokwenzeka, kuhlale kuzizwa kukuhle, kwephula i-cadence yakho futhi mhlawumbe kulahlekelwa umfutho. Ngakho-ke kungaba usizo uma ungakwenza lokhu ngaphansi.
Ikakhulukazi esimweni esinjengalesi lapho ngigibele khona emgwaqeni oyisicaba ngize ngiramp encane bese kufanele ngithuthe amagiya esikhundleni salokho, ngingavele ngiwushiye ocingweni olukhulu ngigweme ukulahleka komfutho ongezansi - i-SRAM izosithola abagibeli bamabhayisikili ababili Kufanele baqinisekise izinto. Okokuqala, yidlanzana labantu abasakholelwa ukuthi amaketanga amakhulu apholile .- Yebo, kunezinga elithile lokuphanga emibuthanweni ethile yokuhamba ngebhayisikili.
Ngisho nokuqolwa kwegenge ungakukholelwa? Ukushayela iketanga lendabuko elingu-53/39 eline-cassette eliqinile elingu-11: 23 abanye bakuthatha njengebheji yokuhlonipha ekhombisa nje ukuthi uqine futhi unamandla kangakanani ukuguqula lawo magiya. - Yebo, ngakolunye uhlangothi , ukugibela amagiya amancane njenge-compact chain set kungakunika isithombe sokuthi ungumshayeli wamabhayisikili obuthakathaka noma mhlawumbe onolwazi oluncane kwi-inthanethi ngikholwa ukuthi babizwa ngama-noobs. - Yebo, asivumelani nhlobo.
Ukuhamba kwakho kukhombisa lapho ugibele khona, hhayi ukuthi unamandla kangakanani, futhi njengoba uzwile, abagibeli abahamba phambili emhlabeni bakhetha amagiya amancane ekukhuphukeni okusabeka kakhulu. Futhi yebo, ngenkathi u-Eddy Merckx eke wangitshela ukuthi akadingi imoto ehlangene, angicabangi ukuthi u-Eddy Merckx wake wakhuphuka i-Angliru eyethula iqembu elisha kungumbono wokuthi amagiya amancane awasebenzi kahle kunezinkulu, futhi lokho khumbula ukuthi nge-sprocket encane, iketanga empeleni kufanele lidlule ekoneni eliqinile, okungenzeka likhuphule ukungqubuzana kwe-drivetrain - yebo, ngombono, ishumi lingakubiza ingxenyana yeshumi nanye, kepha uma unentshisekelo yangempela ekusebenzeni kahle kwedrayivu Ngizokuqonda futhi ukuthi njengoba i-SRAM isungule kabusha uchungechunge nekhasethi kanye namaketanga ukwenza ukuqhathanisa okunengqondo phakathi kokusha nokudala, lonke uhlelo kufanele luhlolwe - Impela, futhi uma ukwazi okuningi Ukuthola mayelana nokukhethwa kwamagiya e-SRAM kanye isethi yeqembu elisha, sicela uchofoze ngezansi. Ngoba uSi wenze i-athikili enhle kakhulu echaza konke - Ngiyabonga buddy.
Ingabe i-SRAM Rival groupset enhle?
Umphikisi we-SRAM Ilingana ne-UShimano 105Imbangiiqoqo lamaqoqo lenani elihle elenzelwe ukugibela okude. Itholakala ngezinguqulo eziyi-10 no-11 zejubane naku-1x.I-SRAM ApexIzinga lokungenaIhlazoiqoqo liqembuokulingana ne-UShimano Tiagra.
Ngabe i-SRAM Rival 1 ine-clutch?
Kodwa-ke, i-Umphikisi we-SRAMUmshini we-1x11iqembu leqembuimele ezinye zeokunconoinani emakethe. Uma ubheka okuthile ngebhayisikili elishaUmphikisi we-SRAMI-1x11 imvamisa imaki lalolo gxuma lokuqala kusuka ezintweni ezihamba phambili kuye ekusebenzeni okuphezulu futhi futhi yenza i-kuhleinketho uma ufuna ukuvuselela ibhayisikili elidala.
Uyemukelwa ku-Ask GMBN Tech, lo ngumbukiso wethu wama-31 lapho singaphendula khona imibuzo yakho mayelana nobuchwepheshe bamabhayisikili asezintabeni. Noma imiphi imibuzo onayo, engeza kumazwana angezansi kwalesi sihloko noma uyithumele ekhelini le-imeyili elingezansi kwesikrini, khona lapho, ungakhohlwa ukusebenzisa i-hashtag #AskGMBNTech ukuze sikwazi ukuphendula imibuzo yakho Ngakho-ke, buza kuqala IGGBN Tech, nginezinkinga ngakho konke okuphambuka kwami, kuyaqhubeka nokuqola. Ngifaka i-grease ezintanjeni kepha ayisebenzi.
Ngithenge ama-pedals amaningi kakhulu ngezinkinga ze-creak. Noma yimaphi amathiphu? Umcabango wami wokuqala ukuthi akusiyona iphedali. Uma kwenzeka kubo bonke abahamba ngezinyawo bakho kungenzeka ukuthi kube enye into ebhayisikili lakho noma esicathulweni sakho.
Ngakho-ke, okokuqala, usebenzisa ama-pedless angenasici? Zinamathisele kuma-pedals akho? Uma kunjalo, khona-ke kungaba yi-cleat evulekile. Kungaba isikulufa esikhanyayo esikhanyayo esenza i-cleat creak inyakaze. Kuhle ukubheka.
Futhi ama-cranks akho. Futhi-ke konke okuhambisana nakho Ngakho-ke lokho ocabanga ukuthi kungaba yiphedali, kungaba yingxenye yaleyo ngxenye ka-gearbox ngoba konke kuthwala umthwalo, yonke i-torque idlula lapho. Ngakho-ke hlola ama-bolts akho wangempela kuma-asi abakaki abaphansi, imvamisa amamilimitha ayisishiyagalombili.
Kwesinye isikhathi kulungile futhi kwesinye isikhathi kushiywe kuye ngokuthi unamaphi ama-brand, qiniseka ukuthi izinkomishi zakho ze-BB zikhona, qiniseka ukuthi ayenzi i-BB uqobo, uma ngabe yilokho ofuna ukukwazi, sizofaka isixhumanisi ku incazelo engezansi kwalesi sihloko ukuze ufunde ukuthi kubakaki abangaphansi kwe-pressfit kwesinye isikhathi bayakha kanjani nokuthi bangayimisa kanjani uma injalo, futhi uphinde uhlole amabhawodi wakho wokuxhuma. Uhlala uncintisana. Noma ngabe zikhululekile noma zinezinhlobo ezithile zokungcola phakathi naphakathi kwemicu zizovumbuluka ngakho-ke udinga ukuzihlola zonke lezi zinto futhi ngethemba lokuthi ungayithola impendulo yakho.
g ukwehla kwesisindo sikaphethiloli
Ngikufisela inhlanhla! Ukumiswa kwemfoloko? Yebo. Ngokuzimisela, ungazisebenzisa, kepha ungazishiyi kuma-stanchion, futhi leyo yishubhu ephezulu yebhayisikili lakho. Futhi kungenxa yokuthi zenziwe ngento enzima impela engakhuhla noma iklwebhe ubuso.
Ngakho-ke uma yilokho ofuna ukukwenza, zama le ndlela encane, futhi inhle ngoba izokusindisa amakhilogremu ambalwa. Imvamisa, le yindlela onamathisela ngayo uthayi we-zip, uyithole kahle endaweni, bese mhlawumbe usika isiphetho. Lungisa ukuxega kwakho, mhlawumbe ukuyiqaphele ngenkathi ushayela, bese kufanele ukhathazeke ngokusika uthayi we-zip.
Manje-ke, izitokofela zanoma iyiphi imfoloko yokumiswa zingaklwebheka kalula, ngakho-ke kudingeka uqaphele lapho uzisika. Ngakho-ke umqondo ongcono ngukuthi uwuphenye uziphu bese uyaludonsela emuva, uludonse luqine ukuze lungangeni endaweni ngendlela efanayo oyothola ngayo indlela yokukuhambisa kwenye indawo. Hlola ukuxega kwakho futhi ngemuva kwalokho ungavele uyixobule bese uyisebenzisa futhi.
Ngakho-ke isixazululo esingcono kakhulu sokumosha nje uthayi we-zip, futhi ngeke uziklwebhe i-hose yakho ngoba ungayisusa. Kulungile, okulandelayo kumayelana ne-impeller, ikakhulukazi ukwakha ama-impellers. Sawubona Doddy, ngidinga ukwakha amasondo amasha futhi bengizibuza ukuthi yini umehluko phakathi kwezicathulo zezicathulo ezimbili ezinqamulelayo, ezinqamule ezintathu, ezinezicathulo ezine, ikakhulukazi ngokuqina.
Bengihlala ngisebenzisa isiphambano ezintathu, kepha mhlawumbe ngicabange ngezimbili ngoba izikhulumi zifushane futhi zingelula kancane. Ngiyabonga kusengaphambili. Kulungile, ngakho-ke kunezindlela ezahlukahlukene zokwakha isondo.
Lezi ezine ezivamile ziyi-radial, ezimbili, ezintathu, nezine zeziphambano. Ngokusobala, kusobala ukuthi abakhulumayo baphuma baqonde ngqo ku-flange, futhi abalandeli bathanda ngqo ohlangothini. Ngemuva kwalokho uthola iziphambano ezimbili lapho iziphambano ezikhululiwe ziphindwe kabili bese kuthi izinketho zesiphambano ezintathu nezine.
Iziphambano ezine zinamandla kakhulu futhi zakha isakhiwo esithe xaxa ngoba izikhulumi ziyagqagqana kakhulu. Kepha bane-spokes ende ngakho-ke iba nzima ngokwengeziwe. Futhi kunzima ngokwengeziwe ukwakha, ngakho-ke isiphambano sezindlela ezintathu yisona esilungile.
Kulula ukwakha, izipikha zifushane kancane, ziqine kakhulu, zithembeke kakhulu, futhi mhlawumbe ifomu elijwayeleke kakhulu lamasondo amabhayisikili, ikakhulukazi uma uthola iqoqo lezindawo zokuzenzela, ake sithi iThemba uChris Kings, uhlanganiswe izintambo amanye angiwazi, amarimu kaMaverick noma ama-ENVE amarimu noma yini. Ungenza futhi iziphambano ezimbili. Akubonakali kangako kumasondo amabhayisikili asezintabeni, ngaphandle kwamasondo akhelwe inhloso.
Sizoba lapho ngomzuzwana. Okunye okungahambi kahle kwezipikili ezijwayele ukwenziwa ngokwesiko, ezinqamulelayo ezine, ezinqamulelayo ezintathu, njll. Ngukuthi kumagesi amaringi ngokweqile, ukuze ukwazi ukubona amagiya eshintsha ukuma manje ngoba unezinto ezinjengemvume engu-157 no-148 ngemuva.
Kumagiya endandatho eyedlulele anamagiya akhulunywa ngokwesiko abezosebenzisa i-J-Bend akhulume futhi ahlanganise lokho neqiniso lokuthi ligobeka ukungena ku-flange bese kuthi lapho liwela amanye ligobeke lidale Izinkinga eziningi esondweni ngoba ama-spokes empeleni acindezelekile futhi lokho kuholela ekhefini ngokuhamba kwesikhathi. Ngakho-ke uma ubona imikhiqizo efana noMaverick ohlangothini lwangemuva ithuthukisa amasondo anamaphethini amaningi, njengeRadial neTwo Cross, gcina isisindo sibe sincane, gcina ukuqina kuphakeme. Ngoba ucabanga ukuthi ibhayisikili elilinganiselwe ngokwalo kufanele lenze okuningi.
Kumele ibhekane nawo wonke amandla asontekile empilo yansuku zonke, uyazi, engabeka ibhayisikili lakho emlilweni. Ungakhohlwa ama-hubs kusuka (ukububula) ingxenye yesakhiwo sebhayisikili. Ngemuva kwalokho kufanele babhekane nokusheshisa nokubopha amabhuleki, okwenziwa ngezindlela ezahlukahlukene kumahabhu.
Kunesihogo sokuningi okufanele ukwenze, ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuthi ukhethe inketho ekufanele. Iwele kabili, impela izipikha ziphinde zibe mfushane futhi, futhi ngoba azidluli kangako, azinamandla kangako ku-wheelet. Ngakho-ke ungahle ulungele okuthile okufana nezwe eliwela izwe, kepha uma ukujabulela ukujikijela ibhayisikili lakho kancane, ukuwela okuthathu mhlawumbe kungcono kuwe.
Ah, lokho kupholile. Lokhu kuvela kuWade Cox. UDoddy, ngingathanda ukubona indatshana yokuthi ungenza kanjani isondo elishibhile njengeCushcore, iVittoria Air Liner, njll.
Ngifuna eyodwa, kepha iyabiza kakhulu. Ngicabanga uhlobo oluthile lwendatshana ye-hack. Empeleni, uNeil wayekhona ngolunye usuku ngoba ushayela owamanqamu we-Enduro World Series eFinale Ligure.
Ngethemba ukuthi ngizophuma naye ngiyokwenza okuthile ngokuhamba ngebhayisikili lakhe. Futhi sakhuluma ngokuthi kufanele silungise kanjani amasondo akhe. Sizobe sesimisa ukungabi namandla, yebo, futhi sibheka izinketho eziningi ezingaphephile, njengeCushcore.
Futhi-ke kuningi emakethe ngakho-ke ngicabanga ukuthi sizobabiza abambalwa babo ukuze sizenzele ucwaningo lwethu futhi sibone ukuthi yini okusebenzayo, kodwa futhi ngicabanga ukuthi kuwumqondo omuhle kithina, eyodwa Yenza imbuzi ngokwakho. Ngiyazi ukuthi uTom osebenza ezinkundleni zokuxhumana unabangani abambalwa abasungula uhlelo lwabo ngakho-ke ngizokhuluma nabo ngibone ukuthi bakwenze kanjani lokho futhi ngicabanga ukuthi singenza i-athikili enhle impela. Kulungile, kuhle lokho.
Ngakho-ke, nginomsindo we-creaking kusuka kuhedisethi yami noma imfoloko lapho ngivula imigoqo ukwenza ithrekhi yokuma noma ukugibela phezu kwamaqhuqhuva. Ngakho-ke ngafaka umjaho waseNewcrown nesethi egcwele yamabhere, akukho shintsho. Ngishintshanise imfoloko ngelinye ibhayisikili, ngishintshe isondo, thru axle, umsindo ubusekhona.
Ishubhu elilawulayo linezimpawu ezimbalwa zokugqoka, kepha akukho ukudlala okungazwakala kumahedisethi. Ngabe unawo umbono wokuthi umsindo ofika imfoloko uvelaphi? Siyabonga ngosizo. Eyokuqala nje, ukuze kucace, uthi ubeka imfoloko kwelinye ibhayisikili, ngabe lokho kusho ukuthi uvivinye imfoloko kwenye ibhayisikili, noma uthole enye uyisusile nenye imfoloko enamathiselwe ebhayisikili lakho ukuze ubone it? uma isaqhubeka? Uma ukhuluma ngemfoloko ebikade isesikhwameni sakho sebhayisikili, bese usifaka kwenye ibhayisikili bese siyakhasa, kusobala ukuthi imfoloko uqobo lwayo.
Uma kungenjalo, kunguhlaka lwakho, uma kungu-Frame, kungaba izinkomishi zamahedisethi kuhlaka, kulokhu khipha ifreyimu, uyihlanze, uqiniseke ukuthi ifreyimu ayinakho (ukububula) noma imifantu. Hlanza uphinde ufake lokho, faka imfoloko yakho, ngethemba ukuthi leso yisixazululo. Kungaba ukuqhekeka kuhlaka.
Ngiyakuzonda ukukulethela izindaba ezimbi. Noma nini lapho ugeza ibhayisikili lakho ngihlala ngeluleka abantu ukuthi balidlulise ngandlela thile izinyo elicolisanayo lihlole nje zonke izinhlobo zezindawo zokucindezeleka ezungeze ithubhu yekhanda engenye yalezo zindawo. Kepha wena, engicabanga ukuthi uma ngikufunde kahle lokho, ama-fork creaks uma uwabeka kwenye ibhayisikili.
Sishintshe indebe yamahedsethi, wena washintsha amabhere ngakho wenza zonke ezinye izinto. Kimi kuzwakala sengathi kungahle kube wumshubhu weshubhu elishintshayo emqhele. Yize lokhu kungajwayelekile neze, benginakho lokhu ezimfoloko ezimbalwa esikhathini esedlule.
Kuyibhadi nje uma kwenzeka. Kuzoba yinto eyenzeka efemini ngesikhathi iqale iphinwe yavele yakhululeka kancane. Manje angazi noma unezidampampu zamatshe noma imfoloko noma ngabe imfoloko yakho iyini, awuzange uyisho ngobuhlakani lapha kepha thola inombolo ye-serial lapho bese uya esitolo sakho samabhayisikili bese ubona ukuthi ngabe kukhona yini imininingwane oyikhumbulayo evela isikhathi nesikhathi futhi bangakwazi ukukweluleka.
Kepha ngicabanga ukuthi yilokho ngoba azikho ezinye izinto eziningi ngemfoloko yokumiswa egcwala njengawe mayelana nokuhlola i-axle thru nezinto? Kunjalo ngokoqobo. Ngakho-ke yeqa iminwe yakho, lena inkinga yakho futhi ungayixazulula, futhi ngethemba ukuthi akusikho ukuqhekeka kuzimele. Abakwa-Street Hawkerz bafuna ukwazi ukuthi kuphephile yini ukusebenzisa uphethiloli ovela ku-chainsaw kababa wakhe, okuyindlela, asekwenzile kakade ukuhlanza iketanga lakhe.
emile ibhayisikili kwesisindo ngaphambi nangemva
Kulungile, i-Street Hawkerz, yebo ungasebenzisa uphethiloli noma uphalafini uma nje usebenzise lokho hhayi uwoyela onama-stroke amabili ovela ku-chainsaw, uwoyela onhlangothi-mbili, angikucabangi lokho kahle, futhi kuzomane kungcolise uchungechunge lwakho. Uphethiloli uqobo, yebo, ungalusebenzisa ukuhlanza uchungechunge. Ngeke isebenze njenge-L ne-L degreasers noma i-cleaner ethile ye-chain, kepha nakanjani ungakwenza.
Akudingeki ukuthi kushiwo, umusi uvutha kakhulu, futhi akuyona into ekahle ongayisebenzisa ngeketanga elihlanze nge-chain nge. Ngakho-ke akunjalo, kepha yebo, ungakwazi. Futhi ngokusobala ukufakazele lokho.
Uma uqhubeka nokuwasebenzisa, vele uqiniseke ukuthi uchungechunge lwakho lucoceke ngokuphelele futhi lomile ngemuva kwalokho, mhlawumbe ulugeze ngamanzi amancane, bese ulusula ngoba awufuni okusalayo lapho ufaka uwoyela kuzixhumanisi zakho zamaketanga . Iqiniso ukuthi lapho ufaka uwoyela weketanga kuyo, idinga ukucwilisa kuma-roller nezikhonkwane zechungechunge ukuze yenze umsebenzi wayo kahle. Ngakho-ke qiniseka ukuthi ihlanzekile ngokuphelele.
Okulandelayo kuvela kuBeto AG. UDoddy, umbukiso omuhle. Ngiluma ukudonsa inhlamvu ku-2018 Canyon CF Lux 7.0. (amakhwela) Lihle ibhayisikili, mfo.
Thanda ukwakhiwa, ngaphandle kwalapho kushintshwa isibambo. Noma yimiphi imibono ngakho? Ngingasithola yini isephulelo uma ngibazisa ukuthi ungithumele? Futhi yini ongayithuthukisa ngebhayisikili ngaphandle kweposi yokudonsa? Ungazama isaphulelo. Nginesiqiniseko sokuthi ngeke isebenze ngoba ngizamile mina iminyaka eminingi, kepha ekuthuthukisweni kwebhayisikili, ngizohlola mathupha okhethekile lapho.
Kubukeka kukuhle impela. Ngingashintsha isondo langemuva, ngingalutholi lonke uphawu lube luhle kakhulu, lukhulu kakhulu kunesondo eliphansi le-XE kimi. Ngingasebenzisa lelo thayi langaphambili, i-Ardent, ngemuva, futhi ngithole okuthile okunolaka ngaphezulu ngaphambili, kepha yimina kuphela, uyazi? Lokho akusebenzi kuwo wonke umuntu laphaya.
Ngingahle ngifake nezinye izibambo ezibanzi futhi, ngiyibuke nje. Mincane lapho, futhi yize ngazi ukuthi yibhayisikili elihamba ngomkhondo le-XE, ngisazithanda izibambo ezibanzi. Imayelana nalokho okulingana kusho ukuthi yini ezwakala kahle, hhayi ukuthi ibhayisikili kufanele libe nobudlova kangakanani noma ukuthi lidinga ukubonwa kanjani.
Ngokuqondene nokushintshwa kwesibambo, ngikuthanda kakhulu. Baxakile kancane, kanti iGrip Shift ibivame ukwethusa uma ungacabanga ukuthi igama lalikade linjani, noma babizwa kanjani, kwakungeyona iGrip Shift, ikubeka kanjalo. Kepha ukuguquguquka kokubambelela kuhle impela kulezi zinsuku.
Ukubonile emabhayisikili amaningi we-XE asikwe kahle, kukhanya kakhulu ngoba empeleni kunezingxenye ezimbalwa ezishelelayo ezinesistimu yasentwasahlobo kuyo. Isebenza kahle kakhulu. Ngiyaninxusa ukuthi niyizame futhi nibone ukuthi niyithola kanjani.
Abantu abaningi abayithandi, kuya ngokuthi uzibeka kanjani izandla zakho ezibambo. Ngijwayele ukubeka izandla zami ngqo ngaphandle kwezibambo noma kunjalo. Ngidonsa ama-brake levers ami kude kakhulu.
Futhi ngingavele ngishintshe into enjalo? Kepha uma ungomunye walaba bagibeli abathanda ukubamba isibambo ngesandla sakho, ungahle ungakwazi ukukwenza ngoba uma ushayela ezindaweni ezimbi, ungashintsha amagiya ngengozi. Kepha nakanjani kuzame. Futhi zibukeka zicoceke kwizibambo ngaphandle kwezingxenye ezengeziwe ezilengiswa ngentambo eyengeziwe.
Ihlanzeke kakhulu futhi ihlanzekile, qiniseka ukuyizama. Sawubona Doddy, ngicela ungichazela ukuthi isiphambuki sisebenza kanjani? Futhi kusebenza kanjani, ngoba okwami ​​kubonakala kungenzi lutho uma kuvuliwe futhi kucishiwe. Yebo, ngingakwenza lokho.
Kulula kakhulu. Ngokuyinhloko kuyisidambisi sokungqubuzana endaweni yokugibela yekheji eliphansi. Eqinisweni, kukhona ibhayisikili ngemuva kwekhamera - ngizolithola bese ngikukhombisa.
Kulungile-ke anginazo izithuthuthu zami lapha ukukubonisa ngoba amabhayisikili ami womabili ane-SRAM okwamanje, kodwa leli bhayisikili line-derailleur yangemuva yeShimano. Njengoba ukwazi ukubona lapha ine-clutch esesikhundleni 'on'. futhi phansi kusendaweni ethi 'off'.
Futhi ngalolo daba, kukhona ukungqubuzana empeleni kuleyo ngxenye yesiphepho empeleni unciphisa lelo pivot phuzu.
Ngakho-ke lapho ufaka i-clutch, ukuyiguqula kuba nzima kakhulu. Manje ngizokukhombisa ukuthi lokhu kulula ngokwanele ukuthi ukwazi ukunakekela okuncane. Luhlelo olufanayo lwawo wonke umuntu osemakethe, yize engabukeka ehluke kancane kunangaphandle.
Lokhu ngokusobala yisiphetho sendawo yokuphela ephezulu impela, lena yi-derailleur yaseShimano Saintdownhill. Zonke izinhlobo zeShimano zine-lever. Eminye izoba mpunga ngombala, eminye ibe mnyama bese kuthi ezinye zezinhlobo ezisezingeni eliphezulu ezifana nalezi kube yigolide.
Ngakho-ke bekezela, ngizokhipha lezi zikulufo. Ngakho-ke qhubeka, ikhava evikelayo ivaliwe futhi njengoba ubona, yilapho ubona iphuzu le-pivot. Lokhu kuhambisana ne-clutch ukuze ukwazi ukuyibona ihamba kunyakazo uqobo njengoba ngihambisa ikheji phambili.
Manje qaphela ukuthi empeleni konke kusongelwe ngaphandle lapho, futhi empeleni - lapho ngifaka isigwedlo kusivala sengeza ukungqubuzana okwengeziwe kuso, sikwenze kube lukhuni ngokwengeziwe. Kepha empeleni ungavala lowo mdilivili othile ngokuwuqinisa kancane. Akuwona wonke ama-derailleurs angaphambili enza lokhu, kepha kuzwakala sengathi isici sakho sangemuva asikhiyanga kahle.
Ungahle uthande ukuyibuka bese uqinisekisa ukuthi ibukeka kanjena. Qiniseka ukuthi azikho izinkinga. Kodwa-ke, zilula kakhulu.
Le yindlela abasebenza ngayo. Futhi ukusonga lowo mbukiso kuleli sonto, kunezindaba ezikhetheke ngempela ezithandekayo zokuthi emasontweni ambalwa sinesivakashi negama laso, uCalvin, eza kimi, unguMnu. Parktools.
Ungumfana onamadevu amakhulu owabona kuwo wonke ama-tutorials eParkTools. Lo mfana wazi konke ngamathuluzi amabhayisikili. Futhi-ke sizokwenza i-Ask Special GMBN Tech noCalvin.
Ngakho-ke thola yonke imibuzo yakho eqondene noCalvin, sebenzisa i-hashtag esesikrinini, #AskCalvin, bese uqinisekisa ukuthi uyayibuza. Wabhale emazwaneni, ubathumele ekhelini ekuqaleni kokusakaza, konke okuhlobene nethuluzi leBerg Bike, uzokwazi impendulo, ngakho-ke faka le mibuzo. Futhi ukuthola ezinye izindatshana ezimbalwa, qala uchofoze lapha uma ngifuna ukubona i-XTR Geek Edition yethu lapho ngibheka khona wonke u-gearbox, lonke iqembu elihlanganisa amabhuleki, nalelohabhu elisha elimangalisayo langemuva, bese uqhafaza lapha ukubona okunye.
Ngingazama nje umsebenzi wami wokuqala we-e-bike. Ngakho-ke akuyona ubuchwepheshe obufanayo ngendlela efanayo, kepha ngigibela ibhayisikili elinobuchwepheshe obukhulu, iKenevo ekhethekile, futhi lokho kuphume noSteve Jones wase-EMBN, ngakho-ke kuhlole lokho. Yindatshana epholile kakhulu, ehluke kakhulu.
Futhi khombisa ukwesekwa okuncane kwabafowethu be-EMBN laphaya. Njengenjwayelo, chofoza imbulunga eyindilinga ukuze ubhalisele i-GMBN Tech. Siyathanda ukuba nathi futhi siqiniseke ukuthi utshela ngathi kubangani bakho abadinga usizo lokulungisa amabhayisikili abo.
Futhi-ke, uma ulungisa ibhayisikili futhi uthanda uCalvin waseParkTools, sinikeze isithupha!
Yikuphi okungcono ukuphikisana noma amandla we-SRAM?
Umphikisi we-SRAM 1Izici:
I-derailleur yangemuva ebanzi (ibanga eliphakathi noma elide) Eyakhelwe ngaphakathibambange-lockout yezinguquko zesondo ezilula. Qondanisa nanoma ibuphi ububanziIhlazoikhasethi. Amabhuleki wokubacindezela akwa-HRD.
Ngabe izingxenye ze-SRAM zingcono kuneShimano?
UShimanofuthiIhlazobobabili benza imikhiqizo esezingeni eliphakeme, kepha indlela abasebenza ngayo nezitayela zabo yehlukile. Ukubheka okwamanjeingxenyeukwakheka kwezwe, kungashiwo ukuthiUShimanoimvamisa yiyona egcina imikhuba emibili. Eminyakeni eyishumi edlule,Ihlazouye walandela drivetrain emisha ngolaka.
Ngabe iSRAM iqhathaniswa kanjani noShimano?
Umehluko omkhulu phakathi kwe-IhlazofuthiUShimanoiqoqo lamaqoqo ukuguquguquka kokushintshwa kwebanga phakathi kwamashifuisihloboenkombeni ye-lever.EzikaShimanoIsilinganiselo esingu-1: 1 sisho ukuthi ikhebula ne-derailleur ziqhubekela phambili ngesikhathi sokushintsha ngakunye.Ihlazoisebenza ngokubekezelelana okuqinile kwesilinganiso esingu-2: 1.
Kungani amakhasethi e-SRAM abiza kangaka?
I-Amakhasethi we-SRAMzilula ngenxa yokushoda kwezicabucabu ezixhuma izingodo ezahlukahlukene, kanye nomshayeli omncane. Kungakho kunjalokubiza kakhulu futhi. futhi okungenani izinto zokuphela eziphakeme kakhulu (njengokhozi, mhlawumbe ezinye zezinto eziyi-11spd) zenziwe ngocezu olulodwa, futhi akuyona into yomhlangano.13.03.2017
Kungani i-SRAM ibiza kangaka?
Intengo.Ihlazookuningikuyabizakune-DRAM. KusukelaIhlazoisebenzisa ama-flip-flops, angenziwa ngama-transistor angafika kwangu-6,Ihlazoidinga ama-transistor amaningi ukugcina i-1 bit kune-DRAM, esebenzisa kuphela i-transistor eyodwa ne-capacitor.
Ngabe i-SRAM yimbi kakhulu kuneShimano?
UShimanofuthiIhlazobobabili benza imikhiqizo esezingeni eliphakeme, kepha indlela abasebenza ngayo nezitayela zabo yehlukile. Uma ubheka ukwakheka kwengxenye yamanje, kungashiwo ukuthiUShimanoimvamisa yiyona egcina imikhuba emibili. Eminyakeni eyishumi edlule,Ihlazouye walandela drivetrain emisha ngolaka.06.09.2019
Ngabe uShimano ungcono kune-SRAM?
UShimanofuthiIhlazobobabili benza imikhiqizo esezingeni eliphakeme, kepha indlela abasebenza ngayo nezitayela zabo yehlukile. Uma ubheka ukwakheka kwengxenye yamanje, kungashiwo ukuthiUShimanoimvamisa yiyona egcina imikhuba emibili. Eminyakeni eyishumi edlule,Ihlazouye walandela drivetrain emisha ngolaka.